Rastrabani.com | राशिफलः फागुन १६ गते बुधबार कस्तो छ ? - Rastrabani.com राशिफलः फागुन १६ गते बुधबार कस्तो छ ? - Rastrabani.com
राशिफलः फागुन १६ गते बुधबार कस्तो छ ?
सन्तति, भाइबहिनी र परिवारका सदस्यसँग आत्मीय सम्बन्ध कायम हुनेछ । आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ । नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग छ । आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला । बोलीकै भरमा विशेष काम सम्पादन हुन सक्छ, क्रियाशील रहनुहोला । प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ । दिन उत्साहपूर्ण रहला । स्वास्थ्य सबल रहनेछ । – ज्योतिषसाथीबाट